Dunida heer sare ah si digital ah maanta, wax walba oo aad u baahan tahay waa in aad telefoon ama qalab. Waxaan u imid inaan ku ku xiran tahay qalabka our smart aad u badan in ay si dhab ah wax aan macquul aheyn in aan la telefoonada ama qalabka noqon yahay. Tani waxay sidoo kale ka dhigan tahay in badan oo ka mid ah macluumaadka aan ku telefoonada iyo qalabka waa run ahaantii muhiim ah in aad maalin ilaa maalinta orodka nolosheena. Sababtan awgeed xogta aannu ku telefoonada naga waa in la ilaaliyo. Haddii aad ku murmi bayaankan, weydii qof oo dhammaan xogta ayaa laga badiyay ay telefoonka iyo mid ahna looma qaadan dib.
Tani waa sababta software kala iibsiga phone waa mid aad muhiim u ah aduunka maanta. Noocan ah software kaa caawin doonaa xogta aad qabto ee aad taleefan si aad u computer gurmad si aad had iyo jeer koobi ay dhacdo in wixii khasaare ah. Phone software kala iibsiga ayaa sidoo kale ku yimaado anfacaya marka aad u baahan tahay si ay u gudbiyaan xogta oo dhan ka mid phone in kale. Sida caadiga ah dadku u baahan yihiin inay sidan sameeyaan markii ay telefoon cusub oo jeclaan lahaa oo dhan xiriirada, fariimo iyo xogta ay telefoonka cusub.
Qaybta phone 1. Top in software kala iibsiga phone
Qaybta 2. Top iPhone in software computer
Qaybta 3. Top Android inay software computer
Qaybta 4. Offical software kala iibsiga telefoonka ee telefoonada smart
1. Wondershare MobileTrans - 1-click Transfer Data Phone Software
Bedelka content dhexeeya Android, iDevice iyo Nokia (Symbian) 1 click.
Kaabta Android, iDevice iyo macluumaadka telefoonka Nokia (Symbian) in computer.
Taageerada 2000+ telefoonada socda Android, Nokia (Symbian) iyo macruufka.
Taageerayaan phone talooyin / wax soo saarka: Waxa ay taageertaa ku dhowaad dhammaan taleefanada ay ka mid yihiin iPhone, qalabka Android iyo Nokia, waxaa ka mid ah Samsung qod6 iyo qod6 Edge. dheeraad ah ka baro halkan >>
Computer OS taageerayaan: Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP (32 & 64bits) / Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10,10, 10.11
Smartphone OS taageerayaan: Android 2.1 si ay Android 5.0 / macruufka 5 ilaa 9 macruufka
2. MOBILedit - Transfer Phone Software
MOBILedit waxaa loo isticmaalaa iyadoo malaayiin qof ujeeddo ah wareejinta content telefoonka iyo maaraynta waxa ay qalab kale. Tani waa software ah koobiyeynta phone weyn oo u haajiraan doonaa dhammaan xogta ka telefoonka galay phone cusub ama PC. Waxaad xakamayn kartaa oo maamuli desktop telefoonka aad ka raaxada ee aad PC.
Bedelka files ka mid phone in kale.
Maamul xisaabta lagu kaydiyo Internet.
Wonderful Content Phone Manager.
Tayadoodii ku jira telefoon la hal taabto.
Nidaamka qalliinka taageeray: Waxaa loo isticmaali karaa in xogta laga macruufka wareejiyo Android, Android inay macruufka, macruufka in macruufka iyo Android inay Android. Waxa kale oo ka shaqeeya Android ay ka mid yihiin Android 5.0 iyo macruufka oo ay ku jiraan arrimo 9.0 qalabka.
Taageerayaan telefoonada talooyin: Waa fududahay in la isticmaalo iyo la shaqeeya telefoonada ugu ay ka mid yihiin Apple, HTC, Sony, LG, Motorola, Nokia, Blackberry iyo Samsung.
Taageerayaan telefoonada wax soo saarka: Qaar ka mid ah telefoonada ee ay taageerayaan ku software waxaa ka mid ah iPhone, Sony, Motorola, LG, Nokia, Samsung iyo qalabka Blackberry.
Download link: Waxaad kala soo bixi kartaa Windows ama Mac halkan Version http://www.mobiledit.com/phone-copier
Wondershare TunesGo ama Wondershare TunesGo (Mac) ku siinayaa awood ay ku wareejiso music, videos, sawiro iyo xiriirada fron mid iPhone / iPod / iPad in kale si fudud. Ka sokow, waxay kuu ogolaanaysaa inaad playlists, songs, videos, Lugood, podcasts si / ka iPhone, iPad iyo iPod wareejiyo. Waxaad ku shuban laga yaabaa in aad iDevice la music iyo video oo uma lihin Lugood. Software ayaa si buuxda u la jaan qaada macruufka 7 iyo macruufka dambeeyay 9.
Si toos ah u gudbiyaan music, videos, xiriirada iyo sawiro u dhexeeya qalabka Apple.
Bedelka audio iyo video ka iDevice in Lugood iyo PC.
Import iyo badalo music video iyo in iDevice qaabab saaxiibtinimo.
Jiid iyo hoos u photos iyo ka qalab Apple
Save iPhone MMS, SMS iyo iMessages sida qaabab XML / TXT / HTML.
Phone taageerayaan: Waxa ay taageertaa dhammaan qalabka iyo aaladaha Android macruufka. dheeraad ah halkaan ka baro >>
Computer OS taageerayaan: Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP / Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10,10, 10.11
Iyada oo software ah PhoneTrans aad si fudud ku wareejin karaa music, sawiro, barnaamijyadooda, filimada iyo videos ka iPhone si aad u computer.
Nidaamyada hawlgalka ay taageerayaan: Waa fududahay in la isticmaalo iyo laga heli karaa labada dhufto ee Mac iyo Windows. Waxaad sidoo kale ku wareejin kartaa dhammaan xogta ka your computer si aad iPhone.
Phone taageerayaan: Waxa ay taageertaa iPhone, iPad iyo iPod taabashada
Download link: Waxaad halkan kala soo bixi kartaa PhoneTrans: http://www.imobie.com/phonetrans/download.htm
Iyadoo iPhonetoPC aad ka iPhone wareejin karo files si aad u computer in hal click. Waxa kale oo aad gadaal kartaa dhammaan faylasha aad oo ay ku jiraan xiriiro iyo Guda wac si aad u computer si aad iyaga ka dib si fudud u soo celin karo. Waxaa sidoo kale la jaan qaada iPad iyo iPod.
Phone taageerayaan: Waxa ay taageertaa iPhone, iPad iyo iPod
Computer OS taageerayaan: Window / Mac OS X
Taageerayaan OS smartphone: macruufka 5 ilaa 9 macruufka
Download link: Waxaad halkan kala soo bixi kartaa PhoneTrans: http://www.iphone-to-pc.com
Wondershare Mobile Go waa software la yaab leh, waayo telefoonka kasta Android. Waxba ma ahan haddii aad rabto in lagu wareejiyo xogta telefoonka ka mid phone Android telefoon ama mid Android inay PC. Waxaad u abuuri laga yaabaa in raad raac ah oo xogta telefoonka iyo ku celin ka dib markii loo baahdo. Waxaad ku maarayn kartid telefoon kula ama cable USB aan.
Abaabulaan barnaamijyadooda aad la software this.
Transfer music, videos iyo sawiro si / ka qalab Android aad.
Transfer iyo edit xiriirada by keyboard PC.
Dhoofinta iyo fariimaha gurmad telefoonka Android inay computer.
Kaabta iyo soo celiyo oo aan khasaaraha xog kasta.
Maamul taleefan kombiyuutarka.
Hubi in aad telefoon u nadiifiyaan taariikhda browser iyo maylka adag.
Taageerayaan phone talooyin / wax soo saarka: Waxa ay taageertaa ku dhowaad dhammaan taleefanada ay ka mid yihiin iPhone, qalabka Android iyo Nokia. Baro wax badan oo halkan >>
Software waxa laga heli karaa sida App ah android iyo sidoo kale macmiilka Windows PC. Waxa ay u ogolaataa user ay u gurmad iyo soo celiyo files ay qalab android. Waxa kale oo aad macluumaadka ku wareejin karaa Android inay Android. Waxaad ku wareejin kartaa Audio, Video, xiriirada, fariimaha iyo xitaa wac abuse.
Operating Systems taageeray: Waxa ay taageertaa oo dhan versions Android oo ay ku jiraan ugu dambeeyay ee Android 5.0.
Telefoonada taageerayaan: Waxa ay taageertaa qalabka gabi ahaanba dhan Android ay ka mid yihiin Samsung telefoonada, HTC, Sony, LG, Motorola iyo kuwo kale oo badan.
Download link: Waxaad SyncDroid ka dukaanka Play Google ama halkan kala soo bixi kartaa http://www.sync-droid.com/
Qaybta 4. Si Rasmi Ah Software Transfer Phone casriga ah
Waxaa laga yaabaa inaad rabto in aad isticmaasho ee software kala iibsiga rasmi ah beroosh telefoonka gaarka ah. Ha noo eegto kasta iyo meesha aad ka heli kartaa.
1. iMazing u iPhone
Software iMazing The kuu ogolaanayaa inaad si ay u gudbiyaan xogta ay ka mid yihiin dhammaan warbaahinta iyo goobaha aad iPhone. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad si fudud u gudbiyaan dhammaan xogta ka iPhone in qalab cusub. Waxaad sidoo kale abuuri kartaa hayaan buuxa oo ay ku jiraan warbaahinta iyo Apps iyo sidoo kale dib u soo nooleeyaan data dhan oo dhan mid ka mid click.
Operating Systems taageeray: Waxaa ka shaqeeya Mac kombiyuutarada iyo Windows.
Taageerayaan telefoonada: Waxa ay taageertaa iPhone, iPad iyo iPod.
Download link: Waxaad iMazing halkan kala soo bixi kartaa http://imazing.com/
Sidoo kale loo yaqaan Tababare u hagaagsan HTC ah, software this waxaa bixiya HTC si loogu isticmaalo dhammaan qalabka ay mobile. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad u hagaagsan warbaahinta u dhexeeya aad telefoon iyo qalab mobile HTC. Waxaad sidoo kale abuuri kartaa dib-upka ka mid ah dhammaan macluumaadka ku saabsan telefoonka HTC si aad u computer iyo ka dib soo celin.
Operating Systems taageeray: Waxaa ka shaqeeya kombiyuutarada Windows.
Telefoonada taageerayaan: Waxa ay taageertaa qalabka HTC.
Download link: Waxaad halkan kala soo bixi kartaa Suite HTC PC ka http://htc-pc-suite.soft112.com/
Samsung Kies waa mid ka mid ah software kala iibsiga Phone ugu fiican oo loo isticmaali karaa si ay u gudbiyaan xogta phone tusaale sawiro, xiriirada iyo music ka phone in PC. Waxaa laga yaabaa inaad aad PC ama kiniin xirmaan telefoonka wirelessly iyo isbedelada oo dhan si toos ah la sameeyo. Software Tani waa si isku mid la jaan qaada carmallada iyo sidoo kale nidaamka Mac hawlgalka.
Xogta ka mid phone Samsung si kale u dhaqaaji.
Bedelka photos, videos iyo music ka qalab si computer.
Maamul faylasha aad sida sawiro, music iyadoo la kaashanayo software this.
Bilaash boos dheeraad ah oo ay xogta ka phone gudbaayo PC.
Waxa keliya oo loo isticmaali karaa si ay u maareeyaan qalabka Samsung aad.
Phone ay taageerayaan, qalabka Samsung Hot, in badan oo qalab ma taageersana.
Computer OS taageerayaan: Windows / Mac OS X
Smartphone OS taageerayaan: Android 2.1 si ay Android 5.0
Haddii aad leedahay telefoonka LG ah ka dibna PC Suite LG waa waxa aad u baahan tahay in ay gurmad iyo maareeyo xogta aad ku jiraan sawiro, video iyo music. Software waxa kale oo kuu ogolaanaya in aad si fudud u hagaagsan aad xiriirada iyo gurmad iyo soo celiyo files ee ku saabsan qalabka LG.
Taageerayaan telefoonada: Waxa ay taageertaa qalabka LG.
Download link: Waxaad halkan kala soo bixi kartaa Suite LG PC http://www.lg.com/uk/support/pc-suite